Topnepalnews.com | तिलक मल्ल र गोविन्द तिवारी सम्वन्ध, २ करोड ठगीका केलाउनै पर्ने पाटाहरु (समाचार टिप्पणी)
Posted on: July 30, 2017 | views: 7024
गोरो अनुहार अनि सँधै सफाचट दारीमा भेटिने गरेका तिलक मल्ल आईतबार साँझ उनकै कार्यालयमा भेटिंदा उस्तै रुपमा भेटिए । तर उनको अनुहारमा भेटिने त्यो मुस्कान र उज्यालो चमक भने खोलि किनारहरुमा देखिन हरियालीलाई साउने भेलको एक झोक्काले उजाड बनाइदिएजस्तै निरस देखिन्थ्यो ।
त्यो निरासाको एउटै कारण थियो जापानमा राम्रो काम र दामको प्रलोभनमा नेपाली युवाहरुबाट २ करोड बढी रकम ठगीका मुख्य आरोपी 'डा. क्रिस त्रिपाठी' भनिने गोविन्द तिवारीसँगै संलग्न भएको आरोप ।
अनुहारको त्यो चकम र उर्जा हराएको बारे आफैंले खुलाउँदै उनले भने-'हिजो आज केही गर्ने जाँगर नै छैन, ह्या... अब भुल्छु भन्यो, जति गरेपनि यस्तै रेछ ! भन्ने मनमा सोच आइहाल्छ ।'
आँखा किनारमा अनिदोका डोबहरु अनि मनभरी तनाव र अनुहारमा त्यसको संकेत देखिने भावहरुका बिच उनले भने-'मलाई नराम्रोगरि फसायो ।'
आफ्नो परिवारका सदस्यको नाममा पैसा जम्मा गर्न लगाउँदाकै कारण दोसी करार गरिएको उही जिकिर सहित मल्लले भने-'राख्ने मान्छेले पनि को मान्छेको खातामा, किन राख्न लागेको एक बचन नसोधी, नबुझी त्यसै पैसा जम्मा गरिदिनुचाहिं गल्ती होइन ? उनले थपे एउटाले जापान लैजान्छु भनेको छ अनि अर्कोको खातामा पैसा हाल भन्छ केही गडबड छ है भनेर सोच्नु पर्दैन । ल राख भनेनै पनि को मान्छेहो खातामा राख्न लागेको मान्छे भन्ने बुझ्नु पर्दैन ? '
तर फेरी निरासालाई ओकल्दै मल्लले भने -'नखाएको बिष मलाई लाग्यो ।'
तिलक मल्ल भन्छन् - सत्यता यो हो !
'२०१५ तिरबाटै गोविन्दलाई चिन्थें । केही सापटी पैसा लिने र दिने चलिराखेको थियो । कलाकार भएको लोकदोहोरी संगठनतिर रहेको भन्दै टोकियो रोधि क्लव खोल्ने बेलामा सेयर हाल्ने कुरा गर्यो । पैसा छ लगानी गर्छु, कलाकार ल्याउन पनी म सघाउँछु भनेपछि कुरा अघि बढ्यो ।
मेरो केही पैसा उसले त्यसअघिनै सापटी लिएको थियो तर दिएको थिएन । त्यही बेला नेपालबाट पैसा मगाउँछु भन्यो । साली, माइजु कुन्नी क कसले खातामा हालिदिन्छन् भन्यो । मेरो सापटी नै फिर्ता नदिइराखेको बेलामा त्यो पनि आउने पार्टनर पनि गर्छु भनेपछि मेरो खातामा नेपालमा तिरिदिने भनेपछि मैले हुन्छ भनिदिएं । पैसा पनि आयो ।
तर त्यसपछि रोधिमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा त्यत्तिकै टर्यो उ पन्छियो । तर अकस्मात १० महिना जति पछि उसले नेपालमा पैसा ठगि गरेको भन्ने कुरा आयो । त्यहाँ सम्म त ठिकै थियो । कस्तो ठगको संगत गरिएछ भन्ने भयो । तर अकस्मात मेरो नाम मुछियो । कसरी भनेको मेरो खातामा पठाएको पैसा उसले ठगेर मगाएको रहेछ । त्यति मात्र होइन नेपालमै भएका केही व्यक्ति र जापानका समेत केही व्यक्तिको खातामा समेत पैसा हाल्न लगाएको रहेछ । तर थोरै रकम अनि पिडितहरुको दवावपछि यो कुरा बाहिर आउने वित्तिकै बदनाम होला भनेर उहाँहरुले पैसा तिरिदिनुभएछ ।
उसले यस्तै सोचेर मेरो नाम मुछिंदा समेत बोलेन । पिडितहरुले पनि यस्तरी चाहिं पैसा फिर्ता आउँदो रहेछ भनेर मेरो नाम लिएर बदनाम गराउन थाले ।
'पिडितहरुले मलाई यतिसम्म अपशब्द बोल्ने, धम्क्याउने थर्काउने गरेका छन् की भनिसाध्य छैन ।' मल्लले यति भनिरहँदा-'यहाँले केही त पक्कै पाएको हुनुपर्छ । मह काट्नेले हात त चाट्छ नै वा भनौं हावा नचली पात हल्लन्न के हो ?' खास उनले उही दोहोर्याउँदै भने -'मैले मेरो फसेको पैसा बाहेक एक पैसा पाएको छैन, बदनाम मात्र पाएं ।'
'अहिलेसम्ममा तिवारीबाट झण्डै १० लाख रुपैयाँ असुल गराएर पिडितहरुलाई फर्काइसकेको छु । मेरो खातामा करिव २० लाख राखिएको थियो । मैले खाएको भए त म जसरीनि फर्काइदिन्थें । खाने र फसाउने तिवारी हो त्यसैले उसलाई १० लाख जति कमाउन अझै ६ महिनाजति लाग्न सक्छ भनेर पिडितहरुलाई ६ महिना भित्रमा मेरो खातामा आएको पैसा फिर्ता गराउन लगाउँछु भनेको छु ।'
'तिवारीसँग भेटघाट र सम्पर्क भइराखेको होला नी !' आश्चर्य भावमा मल्लले भने -' कहाँ सम्पर्क हुनु ! त्यही उसको ठगीमा मेरो सम्वन्ध छैन भनेर भिडियो मगाउन र सहिछाप गर्न लगाउन त मलाई महिना दिन लाग्यो, कहाँ भेट सम्पर्क भइराख्नु ।' मल्लले यति भनेपछि तिवारीको केही पत्रकार तथा व्यक्तिसँग नियमीत वा चाहेको बेलामा जहिलेपनि सम्पर्क गर्न सक्ने सम्वन्ध भएको र उसको मोबाइल तथा फेसबुक दुवै रहेको बताएपछि मल्लले केही खुलाउँदै भने -'उसले चाह्यो भने चाहिं जहिलेपनि हुन्छ हामीले चाहेर हुन्न । म सँग उसको मोबाइल नम्वर फेसबुक केही छैन अहिले ।'
तिवारीको व्यक्तिगत र पारिवारिक खवर खुलाउँदै मल्लले भने - 'अहिले उसको श्रीमती यही तनावले आत्महत्या गर्छु भन्दै सपनामा समेत उठेर हिँड्छीन् रे । जहिले मर्छु मात्र भन्छिन् तनावमा यती छिन् कि यसले गर्दा तिवारी समेत सडकछाप त भइसकेको छ नै बेसुरको कुरा गर्छ कैलेकाहिं ।'
अबको बाटो र (अ)सम्वन्धित पक्षहरु
मैले यस बारेमा चिने जानेका, आफुले मान्ने सबैसँग छलफल गरिसकें । टोकियो रोधि क्लवमा लगानी भएकै कारण यो काण्डमा मुछेर एनआरएन उपाध्यक्ष भवन भट्टको नाम जोडिएकोमा 'उनको कुनै लिनुदिनु सम्वन्ध नरहेको' भन्दै मल्लले आफुले उनिसँग समेत यसमा सल्लाह लिएको खुलाएपनि कस्तो सल्लाह लिएको बताएनन् ।
'कानुनी रुपमा मुद्दा लडेरै पैसा आउँछ, अरुको बदनाम गराएरै पैसा उठाउँछु भन्यो भने त्रिपाठीले १० बर्षमा नि पैसा तिर्दैन । त्यसैले उसलाई दबाव दिएर हुन्छ कि के गरेर ठगिएको पैसा फिर्ता गराउनु मेरो कर्तव्य र दायित्व हो अहिले मैले त्यही गरिरहेको छु ।'
इन्टरपोलबाट दुतावास हुँदै जापान आएको पत्र कहाँ पर्यो अलपत्र !
'यथेस्ट प्रमाण, नेपाल फर्काउनुपर्ने बलियो आधार र दुतावासको त्यही अनुसारको कागजात बुझाएर जापान प्रहरीले भन्न सके त्रिपाठी तीन घण्टामा पक्राउ परेर नेपाल फर्कन्छ ।'
यति भनिसकेपछि 'गृहमन्त्रीको निर्देशनपछि ६ महिना अघि पत्र बनाएरपनि दुतावास नपठाएको इन्टरपोल शाखाको पत्र दुतावासमा आएको र आफुले देखेपनि दुतावासले जापान प्रहरीले पठाएको कागजात र प्रमाण नदेखेको' मल्लले खुलाए ।
आशंका र संशय व्यक्त गर्दै मल्लले 'जापान प्रहरीले एक दुई करोड ठगेको नेपाल फर्काइदिनुपर्यो भन्दैमा नेपालको मुद्दामा त्यस्तो गम्भिर कदम चाल्दैन । तर नेपाली राजदूतावास र नेपाल सरकारको दरिलो पत्र पाएर जापान प्रहरीमा भन्न सके बढीमा २४ घण्टामा जहाँबाट पनि समात्न सक्छ ।'
तिलक सर यत्ति गरिदिनुभए दुध र पानी आफैं छुटिन्छ !
त्रिपाठी नै त्यो कारण हो जसले १० बढी व्यक्ति बाट २ करोड बढी ठग्यो । भलै यसमा संलग्न, सहयोग आदी पाटा पछि खुल्लान् नै । अनि त्यही व्यक्ति हो तपाईकै शब्दमा भन्दा तपाईको २ दशकको जापानको पसिनाको व्यक्तित्व अनि आज सम्मको सग्लो देखिने छवि छायाँमा फेरिदिएको छ ।
तपाई पत्रकारिता बुझेको, पत्रकारिता गरिरहेको र आफैं मिडिया सञ्चालक समेत । जापानमा भएको कुनैपनि घटना र सूचनामा तपाईले पहुँच राख्न सक्नुहुन्छ । अनि आफुमाथि लागेको आरोपमा दूतावासको पत्र र प्रक्रियामै आशंका बढ्नु, तर त्यसको प्रमाण गुपचुप हुनु गम्भिर आशंकाका पाटा हुन् ।
त्रिपाठी जापानमै रहन सफल हुनु अनि त्यसमा केही राजनीतिक दलहरुको संरक्षण वा संलग्न भएको आरोप लागिरहँदा यसमा तपाईको कलम किन मसि सकिएजस्तै एक शब्द नलेखि रोकिएको छ ?
आफु निदोस् छु भन्न कागज र भिडियो प्रमाण जुटाएर लाखबार भन्दा समेत औंला ठड्याइ राख्नेहरुलाई त्रिपाठी यसकारण जापानमा बस्न सफल भइराखेको छ र उ नेपाल फर्कीएपछि ठगी रकम तिर्ने प्रक्रिया लम्बेला तर दोसी उ मात्रै हो र उ नै एकमात्र दोसी हो भन्ने करार गराउन तपाई किन चुकिरहनुभएको छ ?
पत्रकारिता र पत्रकारको एक रुप र सहयात्राको सम्वन्धका आधारमा पनि मैले बुझेको र दल इतरमा कट्टर एकाधबाहेक सबै जापानका पत्रकार र दशौं हजार नेपाली तपाईले जुटाउने प्रमाणमा साथ दिन तयार छन् । तपाई हिम्मत गर्नुस् तथ्य बाहिर ल्याइदिनुस् सत्य पहिचान गर्न हामी सघाउन तयार छौं ।